LA OGAADAY: Ciyaartoyda Xulka Qaranka Spain Oo Shir Gaar Ah Yeeshay, Wixii Ay Maadax Waynaha FA-ga Ee Luis Rubiales U Sheegeen Iyo Qaabkii Ay Iskugu Dayeen In Ay Badbaadiyaan Julen Lopetegui. – GOOL24.NET
LA OGAADAY: Ciyaartoyda Xulka Qaranka Spain Oo Shir Gaar Ah Yeeshay, Wixii Ay Maadax Waynaha FA-ga Ee Luis Rubiales U Sheegeen Iyo Qaabkii Ay Iskugu Dayeen In Ay Badbaadiyaan Julen Lopetegui.
Dhacdada ugu wayn ee dhinaca kubbada cagta ayaa 24 kii saacadood ee la soo dhaafay noqotay isbadalada layaabka leh ee ka dhacay xulka qaranka Spain ee ay sababta u noqotay kooxda Real Madrid oo badalkii Zinedine Zidane u magacowday tababarihii hore ee qaranka Spain ee Julen Lopetegui kaas oo shaqada laga caydhiyay saacado kadib markii uu noqday tababaraha cusub ee Los Blancos.
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales ayaa cadho wayn ka muujiyay qaabka ixtiraam darada uu ku sifeeyay ee uu tababare Julen Lopetegui waqti xaasaasi ah uu maamulka Real Madrid kula xaajooday isla markaana aanu xataa ku soo wargalin waxaana cadhadiisa sii laba jibaartay in uu warkan ogaaday 5 daqiiqo oo kaliya ka hor markii aan saxaafada laga shaacin.
Haddaba ciyaartoyda xulka qaranka Spain ayaa isku dayay in ay badbaadiyaan tababare Julen Lopetegui waxayna isku dayeen in ay dhex dhexaadiyaan madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta ee Luis Rubiales iyaga oo waliba kulan gaar ah qabsaday.
Saddexda kabtan ee xulka qaranka Spain ee kala ah Sergio Ramos, Andres Iniesta iyo David Silva si lamid ah xidigaha miisaanka culus ku leh xulka qaranka Spain ee Gerard Pique, Sergio Busquets iyo Pepe Reina ayaa isku dayay in ay madax waynaha FA-ga ee Luis Rubiales u sharaxaan arinta si loo badbaadiyo Julen Lopetegui.
Waxay ciyaartoyda muhiimka ah ee xulka qaranka Spain u sheegeen madax wayne Luis Rubiales in haddii ay arinta magacaabista Lopetegui ee Real Madrid ay waxyeelaysay isaga in uu iyaga awgeed ku liqo maadaama o ay doonayaan in ay koobka aduunka ku guulaystaan isla markaana ayna fursad kale heli doonin.
Ciyaartoyda Spain ayaa Luis Rubiales u sheegay: “Tani ma aha koox, halkan waxaanu u nimid si aanu koobka aduunka ugu guulaysano, dhamaan waxani anaga ayay na waxyeelaynayaan, haddii ay adiga ku waxyeelaynayso sharaftaada noo liq isla markaana noo ogalow in aanu ciyaarno”.
Laakiin isku daygii ciyaartoyda xulka qaranka Spain ayaa noqday mid fashilmay maadaama oo Luis Rubiales uu si wayn u cadhaysnaa wuxuuna markii ay fikradooda ciyaartoydu u gudbiyeen uu nususaace kadib ka soo muuqday qolka saxaafada ee Krasnodar si uu shaqada uga caydhiyo Lopetegui.
Sidoo kale madax wayne Luis Rubiales ayaa xaqiijiyay in ay ciyaartoyda xulka qarankiisu isku dayeen in ay badbaadiyaan Lopetegui laakiin waxa uu sheegay in go’aan ka gaadhista arintan ay khaas u tahay xidhiidhka kubbada cagta Spain.
Hadda waxay ciyaartoyda xulka qaranka Spain la shaqayn doonaan agaasimihii xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Fernando Hierro kaas oo shaqada La Roja ee koobka aduunka hore ka bilaaban doona.